ရွှေနိုင်ငံ: သက်မွန်မြင့် - သေသေချာချာမသိဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံကို နှိမ့်ချပြီးပြောတာမျိုး စိတ်မကောင်းဘူး
သက်မွန်မြင့် - သေသေချာချာမသိဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံကို နှိမ့်ချပြီးပြောတာမျိုး စိတ်မကောင်းဘူး
Queen Jewel ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် စီစဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖြူ(အ၀ကျွန်း)
ဇာတ်လမ်း ကို ဇာတ်ညွှန်းသည်ခေတ်နေ၊ ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာညီညီအောင် ရိုက်ကူးပြီး နေတိုး၊ သက်မွန်မြင့်၊ ရတနာဖြူဖြူအောင်၊ ဇော်ဦး၊ အောင်ခိုင်၊ ဇော်ဝင်းနိုင် (မန်း)၊ သား ညီ၊ ဇော်ဇော်အောင်၊ ဒိန်းဒေါင်၊ ကေညီ၊ ကေငြိမ်း၊ မေသဉ္ဇာဦး၊ ၀ါဝါအောင်၊ သန်းသန်းစိုး၊ အေးသီတာ၊ လမင်းကဗျာနဲ့ သရုပ်ဆောင်များစွာ ပါဝင်တဲ့ ``နက္ခတ်မှားတဲ့တိုက်ပွဲ´´ ရုပ်ရှင် ကန်တော့ပွဲပေးအခမ်းအနားကို ဇူလိုင် (၄)ရက်၊ နံနက် (၉)နာရီက ရန်ကုန်မြို့ Park Royal ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းမှာ နေတိုးက ဇာတ်ရုပ် (၃)မျိုးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သက်မွန်မြင့်ကလည်း ဇာတ်ရုပ်ပုံစံနှစ်မျိုး နဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားကာ ရတနာ ဖြူဖြူအောင်ကတော့ NGO မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ ဆရာဝန်မလေးပုံစံ သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
``သက်မွန်က ကျောင်းတက်ရတာ၊ စာကျက်ရတာ အရမ်းဝါသနာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဖြစ်လာတာ သရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ ဒီအလုပ်က စိတ်နှစ်ရတယ်။ အချိန်အရမ်းပေးရတယ်။ ကိုယ်ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါ သည်ဖြစ်စေ ဒီရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ နေနေရတဲ့အခါကျတော့ ကျောင်းတက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ ကျောင်း တက်မယ်ဆိုရင် ကျောင်းတက်ပြီးစာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ အသက်အရွယ်ကလည်း စကား ပြောလာပြီလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သက်မွန်ကျောင်းသီးသန့်တက်တာ မျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘာသာစကား တစ်ခုခုကို သင်ဦးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာ မျိုးရှိပါတယ်။ ခုလောလောဆယ် တော့ဒီအလုပ်ကို စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ချင် သေးတယ်။ လက်မလွှတ်ချင်သေးဘူး´´ ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်ကို ခဏတာ မေးမြန်းခဲ့ ပါတယ်။
Q. သက်မွန်ဒီကားထဲမှာ သက်မွန်ရဲ့ဇာတ်ရုပ်အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ။
A. ဇာတ်ရုပ်ပုံစံနှစ်မျိုးပါ။ အငယ်ဇာတ်ရုပ်ရှိမယ်။ ပြီးရင်အကြီး ကိုနေတိုးရဲ့ အမေနေရာက ဇာတ်ရုပ်ပေါ့။ စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အမျိုးသမီး သူက သွက်သွက်ခါအောင်ရူးနေတာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ အသက်အရွယ်နဲ့ သူ့ရဲ့စည်းစိမ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တော့ သရုပ်ဆောင်ရမှာပေါ့။
Q. ဒီလိုရူးတဲ့ဇာတ်ရုပ်က သက်မွန်အတွက် ဒါဘယ်နှကြိမ်မြောက်လဲ။
A. သက်မွန် ခဏခဏရိုက်ရတယ်။ ဇာတ်လမ်းကွာရင်တော့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံတွေ ကွာသွားမှာပေါ့။ အ၀တ်အစားတွေ ဂရုစိုက်ပြီးပြင်တယ်။ အိုက်တင်က သက်မွန် Scene ပေါ်ရောက်ရင် ကိုယ်ပြော ရမယ့်စကား ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ရ မယ့် Mood ကို ပီပြင်အောင်လုပ်တယ်။
Q. သရုပ်ဆောင်သက်တမ်း ကြာလာတဲ့အခါ ဇာတ်ရုပ်တွေက ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီးလွယ်ကူလာစေလား။
A. စစချင်း သရုပ်ဆောင်ခါစ တုန်းကလောက် မခက်တော့ဘူး။ ရိုက်တာများလာတဲ့အခါ ဒါရိုက်တာတွေရဲ့ သင်ပြမှု၊ အတွေ့အကြုံတွေက ရတဲ့သဘောတရားတွေ နားလည်လာတယ်။ ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေကြည့်ပြီး ပညာယူတယ်ဆိုတော့ အရင်လောက်မခက်ခဲပေမယ့် ဒီအလုပ်က စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ် တစ်ခုဖြစ်တယ်။ စိတ်ကြည်နေရင်လုပ်ရတာ လွယ်ကူတယ်။ အိပ်ရေးတွေပျက်ပြီး အရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့ အခါ ကိုယ့်စိတ်ကို ခိုင်းရတာမလွယ်ဘူး။ အဲဒီခါကျရင်တော့ သရုပ်ဆောင်ရတာခက်တယ်။
Q. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အရေအတွက် လျော့ရိုက်ခိုင်းတာကသက်မွန်အတွက် ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေလား။
A. တစ်ခုခုမှာ အဆိုးအကောင်းက ဒွန်တွဲနေတာပါပဲ။ အဲဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် လူက အနားရသွားတယ်။ ပြင်ဆင်ချိန်တွေ ရလာတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဇာတ်လမ်းအရ ဆယ်ရက်လုံး မရိုက်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရှိတဲ့အခါ အနားပိုရတယ်။ ကြော်ငြာရိုက်ဖို့ ရက်ချိတ် လွယ်တာလေးတွေ ရှိလာတယ်။ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ကားရိုက်ရက် ကားအရေအတွက်သာ သတ်မှတ်လိုက်တာ ၀င်ငွေကတိုးလာတာ မဟုတ်ဘူး။ ၀င်ငွေဘက်ကြည့်ရင် တအားနာတယ်။ ရင်မောရတဲ့ အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ တခြားသူတွေလည်း အဲဒီလိုအခက်အခဲ လေးတွေရှိကြမှာပါပဲ။ တစ်သက်လုံး ဒီလိုပဲသွားမှာလားဆိုတော့ မသေချာဘူးလေ။ ပြုပြင်နေဆဲ ကာလဆိုတော့ ဈေးကွက်ပျက် နေတာတွေလည်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့ကြိုးစားနေတယ်။ ကြိုးစားနေတဲ့အပေါ်မှာ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ သက်မွန်တို့က တစ်တပ်တစ်အား ကူညီပေးတဲ့သဘောပါပဲ။
Q. ပိန်သွားတယ်နော်။ ဇာတ်ကားအတွက် ၀ိတ်ချထားတာလား။
A. မဟုတ်ဘူး။ ``လူးရတနာသိုက်´´ ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းက တအားပင်ပန်းတယ်။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် အဲဒီလောက် ပင်ပန်းတာမရိုက်ဖူးဘူး။ နေ့လယ်ရိုက်ညကျရင် နောက်တစ်နေရာကူး။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မြို့ တွေကို ကူးပြီးရိုက်ရတာ ရိုက်ရက် (၂၀) ပြည့်ပဲ။ တောထဲမှာရိုက်တဲ့အခါ အစားအသောက်အနေ အထိုင်ကလည်း ဆင်းရဲတယ်။ လူလည်းမောပြီးပိန်သွားတယ်။
Q. အဲဒီထဲက ၀တ်စုံဒီဇိုင်းတွေ က ဘယ်သူ့ Idea လဲ။
A. လူးလူမျိုးတွေအကြောင်းရိုက်တာဆိုတော့ ဒါရိုက်တာနဲ့ဒီဇိုင်နာ တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ထားတာပါ။ ဆံပင်နဲ့တခြား accessories လေး တွေကတော့ သက်မွန်စဉ်းစားပြီး လုပ်ရတာပေါ့။
Q. အဲဒီထဲက သက်မွန်ရဲ့ပုံနဲ့ PEE MAK ထဲက NAK ရဲ့ပုံနဲ့ ယှဉ်ထားတဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လို ခံစားမိလဲ။
A. ဒါကတော့ လူတွေကသူတို့ စိတ်ကူးရတာလုပ်တာပဲ။ ကိုယ်က အနုပညာရှင်ဖြစ်နေတော့ ဒါကို မလုပ်နဲ့လို့လည်း ပြောလို့မရဘူး။ တစ်ခုပဲ Comment တွေ ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ သေသေချာချာ တိတိကျကျမသိဘဲ ကော်ပီလား၊ ကော်ပီမဟုတ်ဘူးလား ဆိုတာတွေက အငြင်းပွားနေကြ တယ်။ သက်မွန်တို့က ဇာတ်ကား မထွက်လာသေးဘူး။ ရင်လျားဝတ် တယ်ဆိုတာကလည်း အရင်ခေတ် တွေကလည်း ရှိတာပဲ။ ဆံပင်အလယ်ခွဲတယ်ဆိုတာကလည်း သက်မွန်မော်ဒယ်စလုပ်ကတည်းက ခွဲခဲ့တာ။ အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် Comments တွေထဲမှာ ဆဲတာတွေပါတော့ အဲဒါတွေကို သဘောမကျဘူး။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကညံ့တယ်။ သူများနိုင်ငံကကားကို ကော်ပီကူးချတယ်ဆိုပြီး မသိဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်နှိမ့်ချ ပြောတာမျိုးတော့ တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူး။
Q. သက်မွန် Printed မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဓာတ်ပုံမရိုက်ပေးတော့ဘူးဆိုပြီး ဖြစ်မိလား။
A. မရိုက်ပေးဘူးဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ သက်မွန်က အလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေတော့ သူတို့ရိုက် ချင်တဲ့အချိန် ကိုယ့်ဘက်ကလည်း မအားတဲ့အခါကျတော့ မရိုက်ဖြစ် တာတွေရှိတယ်။ စာနယ်ဇင်းဆိုတာက ကိုယ်စလုပ်ကတည်းက ကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေပရိသတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုပေါင်း ကူးပေးတဲ့သူတွေဆိုတော့ အဲဒီလို တစ်ခါမှ မစော်ကားဖူးပါဘူး။
Q. မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလား။
A. ဒါကတော့ လောကတစ်ခုမှာ ကောင်းတဲ့သူရှိသလို မကောင်းတဲ့သူလည်း ရှိမယ်။ ကိုယ့်ကိုစိတ် ချမ်းသာမှုပေးတဲ့သူရှိသလို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့သူလည်း ရှိမယ်။ ဒါကတော့ သဘာဝပါပဲ။ အဲဒီ အပေါ်မှာ သိပ်မခံစားပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာက ဒီမှာက ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကို သတင်းသမားကလာရတာ သီးသန့်အချိန်ပေးပြီးလုပ်တာရှားတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာဆိုရင် အင်တာဗျူး တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် သီးသန့် Appointment ယူ သေချာချိန်းပြီးပြော ဆိုကြတာ ဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန် ရှုတင်မှာလာပြီးမေးရရှာတာကိုး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်ကလည်း လောနေတဲ့အချိန်၊ ဒီဇာတ်ရုပ် အပေါ်မှာ စိတ်နှစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင် မဖြေပေးနိုင်ဘူး။ အဲဒါလေးတော့ စာနယ်ဇင်းဘက်က နားလည်ပေးရမယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့က လည်းစောင့်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း ဟာဆိုပြီးပြန်သွားကြတယ်။ အဲဒီလိုတွေတော့ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
A. ခုချိန်ထိအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သက်မွန်ဘက်ကနေလည်း အားပေးရကျိုး နပ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။
မေသက် (8 DAYS JOURNAL)
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 15:38